Semi-oluzenzekelayo Uhlobo Ndiyila Machine Ukwakha kunye Factory | Xiong Ewe
• Yongeza inkqubo yokuCwangciswa kweLogic Controller (i-PLC) kwisiseko somatshini oqhelekileyo owenza umatshini, owamkela izixhobo zombane eziphambili kunye ne-pneumatic, kunye nokusebenza kunokutshintshwa ngokuzenzekelayo nangokuzenzekelayo. Sisiqalo esiphakathi kwaye sinokutshintsha iindlela zokufudumeza ngokweefom zemveliso.
• Ihlisa iimfuno zobugcisa kubaqhubi kwaye yonke imisebenzi inokulawulwa yi-PLC.
• Ukondla ngaxeshanye iindawo zokutyisa ezininzi konga kakhulu ixesha lokondla.
• Ixesha lomjikelo wonke wokondla izinto, ukufudumeza, ukupholisa kunye nokonakalisa luchanekile kwaye luzinzile. Igcina ixesha, inciphisa iindleko, iphucula izibonelelo zoqoqosho kunye nokuphucula umgangatho wemveliso.
Kukwanciphisa ukusebenza kunye nokusebenza ukuze umntu omnye akwazi ukusebenzisa oomatshini abaliqela.
Ubukhulu Mould enkulu
I-1000 * 800
Uxinzelelo loxinzelelo lomoya
Umatshini unokwenza imveliso eyahlukeneyo yeeps, ibhokisi, ipakethe, itreyi, njl. Sele sithengisa umatshini kumazwe angaphezu kwe-100, sinodumo oluhle. Bonke abathengi bathanda uyilo kunye nomgangatho ozinzileyo.
Egqithileyo Zenzekelayo Cutting Machine
Okulandelayo: Umatshini oZenzekelayo wePSZ Series Machine